Limi ngothi nkombose kababa ngesimo sezwe emnothweni - Bayede News
Leli ngelinye lamasonto esingalichaza njengeliphathele iNingizimu Afrika ubunzima.
Kulindelwe izinqumo ezinqala ezimbili, lapho uNgqongqoshe Wezezimali uMnu uTito Mboweni azisa umhlaba isethulo esibuyekeza ukusetshenziswa kwezimali eNingizimu Afrika kulesi sigamu sesibili sonyaka. Lesi sethulo sinzima ngoba singanomthelela omkhulu esinqumweni esizokhishwa ngabakwaMoody ekupheleni kwesonto.
Sichaza ukuthi njengezwe laseNingizimu Afrika sisazokwazi yini ukukhokha isikweletu esibalelwa kusigidintathu omthathu (R3 trillion), ngokwethembeka. Siveza ukuthi umnotho wezwe asengawethemba yini amanye amazwe ukuthi abatshali bezimali basengatshala ngokukhululeka ezweni.
Sewenziwe lo mbiko, siloba sesilindele ngabomvu ukuthi inhlangano iMoody ithi isengathenjwa yini ngokuphatha umnotho.
Kunzima-ke ukulindela isinqumo ongenamandla angako okusivimba ngoba kubhekwa indlela izwe eliziphethe ngayo nendlela ehlahlwa yilabo abaphethe izwe.
Noma kunjalo kujabulisile ukuthi leli sonto siliqale izimakethe zithanda ukuvuna irandi laseNingizimu Afrika lisimama.
NgoMsombuluko zingama-28 kuMfumfu 2019
Izimakethe zivule irandi likhombisa ukusimama uma liqhathaniswa nezinye izimali nangoLwesihlanu. Idola lase-USA belilingana namarandi ali-14,62 okuyinto enhle ukuthi izinsuku ezine zilandelana alifi kanga kumadola ali-15.
Uma liqhathaniswa noPondo waseBritain bekudingeka amarandi ali-18,74 ukulinganisa noPondo. Lokhu kuveza ukusimama kwerandi ngoba sivale ngoLwesihlanu upondo ulingana namarandi ali-18, 84.
Ngokunjalo iYuro sivule izimakethe lithanda ukwehla ngoba belilingana namarandi ali-16,21 okungcono kunangoLwesihlanu kuvalwa izimakethe
NgoLwesibili zingama-29 kuMfumfu 2019
Lisimeme irandi lafi nyelela ezingeni elingakaze libe kuso emasontweni ayisishiyagalolunye uma liqhathaniswa nedola lase-USA. Idola lase-USA kuvulwe ezimakethe ngolwesiBili lilingana namarandi ali-14, 56.
UPondo waseBritain nawo uthanda ukwehla ngoba zivule izimakethe ulingana namarandi ali-18,70. INyunyana yamazwe ase-Europe imemezele ukuthi ubulunga beBritain busazoqhubeka kuze kube yinyanga uMasingana. UNdunankulu waseBritain uMnu uBoris Johnson wehlulekile ukuthola amavoti enele ukukhipha iBritain eNyunyaneni yamazwe ase-Europe. Kuyasijabulisa njengezwe uma irandi liqhubeka nokusimama.
Kuyamamathekisa ukuthi liyaqhubeka nokusimama irandi. Sivule izimakethe iYuro lilingana namarandi ali-16,15 okungcono kunalapho kuvulwe likhona ngayizolo.
NgoLwesithathu zingama-30 kuMfumfu 2019
Lithande ukuphelelwa ngamandla irandi ngoba kuvulwe ezimakethe kudingeka amarandi ali-14, 62 ukuze lilingane nedola lase-USA. Libuyele lapho lalikhona kuvulwa ngoMsombuluko.
Bazomamatheka abezimoto ngezayo ngenxa yentengo kaphethroli
Ngokunjalo kuvulwe lithanda ukwehla irandi uma liqhathaniswa noPondo waseBritain. uPondo waseBritain sivule ezimakethe ulingana namarandi ali-18,81 okuthanda ukujabhisa kithina basebenzisi berandi.
Izimakethe zomhlaba ziyavunana. Kuvulwe izimakethe lehlile irandi uma liqhathaniswa neYuro, ngoba bekudingeka amarandi ali-16,24 ukuze irandi lilingane neYuro, okungaphansi kwalokho esivule ngakho ngayizolo.
NgoLwesine zingama-31 kuMfumfu 2019
Emva kokuba uMnu uTito Mboweni ethule isibuyekezo sakhe kunezimpawu zokuthi iyazika inqanawe, uma sibuka isimo iNingizimu Afrika ekuso ngokomnotho. Sivuke idola lase-USA lizenzela phezu kwerandi ngoba amarandi adingeka abe yi-14,97 ukuze alingane nedola lase-USA. Isimo siphinda emuva ngejubane.
Ngokunjalo noPondo waseBritain uzinike amandla phezu kwerandi walingana namarandi ali-19,34 okuyisimo esibi kakhulu emva kokuba belithembisa irandi ukuthi liyadlondlobala.
Njengoba ngiphawulile ngenhla izimakethe ziyavunana ngoba iYuro lenze okufanayo limi ekutheni lona lidinga amarandi ali-16,74 ukuze likwazi ukumanyaniswa namarandi aseNingizimu Afrika.
Noma kunje njengomcwaningi obuka amacala amaningi nginethemba elikhulu lokuthi abakwaMoody ngeke bayehlisele kwalasha iNingizimu Afrika uma sebenza isimemezelo sabo.
Ngokunjalo sithi thokola themba ngentengo kaphethroli nodizili ngoba sekushiwo ukuthi inani lizokwehla noma kubonakala ukuthi ngoLwesine intengo kawoyela. Ngifi sa ukugcizelela ukuthi kuyosiza uma yilowo nalowo ezibheka amacala mayelana nezikweletu ngoba zinomthelela omkhulu esimweni izwe elikuso.
Bayede News Nov 6, 2019